JAMHUURYADDA SOMALILAND WAA LAMA HURAAN INAY TALLAABO ADAG KA QAADDO CADAAWDDA AAN KALA GO’A LAHAYN EE MAAMULKOLAYGA FARMAAJO IYO CAADAQAATAYAASHA U ADEEGA KU HAYAAN QARANIMADA SOMALILAND | Salaan Media
JAMHUURYADDA SOMALILAND WAA LAMA HURAAN INAY TALLAABO ADAG KA QAADDO CADAAWDDA AAN KALA GO’A LAHAYN EE MAAMULKOLAYGA FARMAAJO IYO CAADAQAATAYAASHA U ADEEGA KU HAYAAN QARANIMADA SOMALILAND
December 5, 2018 | Published by: Hamse
JAMHUURYADDA SOMALILAND WAA LAMA HURAAN INAY TALLAABO ADAG KA QAADDO CADAAWDDA AAN KALA GO’A LAHAYN EE MAAMULKOLAYGA FARMAAJO IYO CAADAQAATAYAASHA U ADEEGA KU HAYAAN QARANIMADA SOMALILAND.
Waxaynu ognahay in aan maamul kolayga Farmaajo ee Xamar ka dhisani ka waantoobin mijaxaabinta iyo hagardaamada Jamhuuriyadda Somaliland. Waxay geed dheer iyo geed gaabanba u fuulaan sidii ay u waxyeelayn lahaayeen jiritaanka iyo Qaranimada Somaliland.
Waxaa meesha ka maqan ficil qaadasho ka timaadda Somaliland. Waxay ka gaabisay inay ka hortagto dhibaatadaa iyo colaaddaa hadhbeeshay ee aan kala go’a lahayn, ee maamulkaa Xamar ee awood u waayay inuu amaankiisa sugo. Halka ay ilaaliyaan ciidamo calooshooda ushaqaystayaal, oo Afrika looga soo yaboohay.
Somaliland waxaa la gudboon inay tallaabooyin lama huraan ka qaaddo cadaawaddaa joogsan la’ , xadna u yeesho siday ula dhaqmi lahayd maamulkaa itaalka daran ee xaafad Xamar ah awood u waayay inuu sugo amaankeeda.
Xeer ilaalinta iyo laanta amaanku waxay ka gaabiyeen inay daba galaan hagardaamada ay gaystaan dadka sheegta inay Somaliland ka soo jeedaan ee ka qaybqaata waxyeelada maamulka Xamar u maleego jiritaanka Qaranimada Somaliland.
Dadkaasi waa caadaqaatayaasha ku jira maamulka Xamar, ee ah wasiirrada, Golaha Sare ee Odayaasha, iyo Golaha Baarlamaanka Federaalka. Dhammaantood waa dambiilayaal Qaran, oo Farmaajo maamulkiisa kala qaybqaata la dagaalanka jiritaanka Somaliland.
Dadka noocaasa waa waajib in lagusoo oogo Dembiyada ah Khiyaamo Qaran inay ka galeen Dalka Somaliland ee ay sheegteen inay kasoo jeedaan.
Waxaa la yaab ah in dadkaasi si baxan adduunka ugu doodaan inaanay Somaliland xaq u lahayn inay aayaheeda ka tashato, iyaguna ay yihiin dad ka soo jeeda Somaliland. Arrintaasi waxay laanta ammaanka iyo xeerilaalinta Somaliland u banaynaysaa inay Dembigooda soo habayso, oo horkeento maxamadda Qaran.
Haddii aan tallaabo adag laga qaadin caadaqaatayaashaa dhuuniga dhaafsanaya dalkooda, iyo sharafta ummaddooda waxay dhalaysaa, in cid waliba dhayalsato Dastuurka Qaranimada Somaliland.
Waa in dunida loo muujiyaa in dambiilayaasha qaran, ay la kulmi doonaan ciqaab adag oo aanay mahadin. Waynu aragnaa iyaga oo idaacadaha ka doodaya,, oo weliba duraya in Somaliland aan ahayn Dal madaxbanaan. Ayna ka qaybqaataan cid kasta oo colaadda iyo cadaawadda Somaliland ka shaqaysa.
Waxaa iyaduna lama huraan ah in Somaliland sugto xuduudda jamhuuriyadda, maadaama ay keenayso in lagu soo dhiirrado, in la carqaladeeyo dagganaasha Somaliland. Wax kasta oo kubaxaya cidna laga yeeli maayo. In dawladaha Afrika ee xuduuddii gulmaysigu jeexay sheegta, isla markaana Somaliland oo xornimada ka horqaadatay ay ku boorriyaan inay xuduuddeeda goggortan geliso.
Maamulada Afrikaanka ah ee mid walba sheegto xuduuddii gumaysigu jeexay, xaq uma laha inay Somaliland kala hadlaan inay ka gaabsato inay xuduuddeeda amaankiisa sugto. Waa inay ka waantoobaan kuwa sidaa ula yimaadda Somaliland.
Somaliland waa inay ka dalbataa dawladda Imaaraadka iinay Aqoonsato, maadaama ay u oggolaatay inay Saldhig Milatari ka dhisato Somaliland. Suuragal ma noqonayso in dawladda Imaaraadku Saldhig Milatari ku yeelato Somaliland, oo amaankeeda, iyo dhibaatooyin kaleba ay u keenayso, iyo cadaawad kaga timaadda aano dawladda Imaaraadku gaysatay.
Xukuumadda Somaliland waa inay tallaabada ku habboon ka qaaddaa. Mar haddii ay arrimahaasi oo dhammi Qaranimadeeda dhaawacayaan.
Golayaasha Baarlamanka iyo Guurtidu waajibkooda ha maraan, inta ay xukuumadda ku hallaynayaan, halka ay iska dhigayaan qaar aan danbiga qayb ku lahayn.
Waa in lala xisaabtamaa caadaqaatayaasha xamar iyo Farmaajo adeegsado, ee wasiirada iyo baarlamanka xamar ku jira. Waa in hal hal dembigooda loo iclaamiyaa, ciqaabtoodana maxkamad la geeyaa, xataa hadday dalka ka maqan yihiin.
Dembiile qaran waa dembiile qaran meel kasta oo uu ku sugan yahay. Waa inay ogaadaan inaan Qaranku ka hadhaynin ciqaabtooduna sugayso, maalinta gacanta lagusoo dhigo.
Rabbi ayaa Mahad leh.